Mary Shelley – Kaasho Maanka
Inkasta oo aqoonyahankii iftiinku u badnaayeen rag sababo jira awgood,hadana waxaa jira haween kaalin mug-wayn ka qaatay dhaq-dhaqaaqaas. Hadaba waxaan jeclaaday in aan halkan ku xuso qof aan u arko in uu muhiim u yahay iftiiminta cilmiga suugaanta iyo falsafada, waa Mary Shelley.
Waxay dhalatay 30 August 1797 waxayna dhimatay 1 February 1851. Mary waxay ahayd xaaskii ama afadii gabayaagii iyo faylasuufkii waynaa ee Percy Shelley oo ay magaciisa ku xusan tahay.
Hayeeshee aabaheed waxaa weeye siyaasigii, aqoonyahankii, wariyihii iyo faylasuufkii
William Godwin. Hooyadeedna waa faylasuufaddii u doodi jirtay sarraynta iyo xuquuqda haweenka “Feminism” ee Mary Wollstonecraft. Inkasta oo Mary hooyadeed ay dhimatay bil kadib markay dhalatay hadana aabaheed William Godwin oo ahaa nin ladan ayaa ku soo koriyay nolal ladnaan ku jirto.
Sanaddii 1814 Mary waxay baratay Percy Shelley oo ahaa gabayaa caan ah oo ay saaxiibo dhaw ahaayeen aabaheed, kadib markii ay ka wada hadleen suugaanta iyo falsafadda, waxaana dhex-maray jacayl Shelley iyo Mary. “Mary Shelley” oo ah magaca filim soo baxay sannadka 2018 ayaa lagu saleeyey jacaylka dhex maray Mary iyo Shelley.
Filimkan oo dhamaystiran halka ka daawo Mary Shelley (2018)
Sanaddii 1818 Mary waxay soo bandhigtay buugga caanka ah ee ay ku caan baxday “Frankenstein” waa qoraal ka hadlaya Victor Frankenstein oo ah nin dhalin yaro ahaa oo isku dayay in uu sameeyo dad nool oo caqli leh. Buuggaas waxaa loo aqoonsaday buugaagta sheekada cilmiga (Sci-Fi) kuwa ugu qiimaha wayn ilaa iyo maantana waxa uu kamid yahay buugaagta aadka loo akhristo filimo badanna laga dhigay.
Mary waxay jirtay 18 sano oo kaliya markay curisay buuggaas. Taariikhyahannadu waxay sheegeen in Mary ay qortay buugag badan oo ka mid yihiin; Valperga (1823), Perkin Warbeck (1830), The last Man (1826), Lodore (1835), Falkner (1837), Rambles in Germany and Italy (1844).
QORMO LA XIRIIRTA: Wadaadku waa bahal gadh leh
Kadib markii uu dhintay Percy Shelley oo ahaa saygii Mary waxay Xoogga saartay in ay uruuriso gabayadii saygeeda kadib markii si lama filaan ah uu u dhintay sannadkii 1822. Halkaas oo biyaha baddu ku liqeen gacanka La Spezia ee dhinaca galbeed ee wadanka Talyaaniga.
Maray waxay ku dhimatay magaalada London sanadii 1851 ayada oo jirtay markaas 53 sano.
Ma jirto xadaarad Islaami ah!
Qaybta: Diinta Islaamka, Sooyaal
Carabtu waxay ahaayeen welina yihiin dad aan abuuri karin horumar iyo farsamo, maaha dad u dhashay hal- abuurnimo wax kasta oo nolosha fududeeya waa ay soo dejistaan, waxaa iyaduna khalad iyo jaahlnimo ah in talis siyaasadeed loogu yeedho ilbaxnimo.
Xiriirka ka dhaxeeya diinta Hinduuska iyo diimaha Ibraahiimiyada
Qaybta: Diinta Hinduuska, Diinta Kiristaanka, Diinta Yuhuudiyadda, Diinta Zoarastrianism, Nabi Ciise, Nabi Maxamed, Sooyaal
Diimuhu waa sida badaha dunida, waa kala magacyo laakiin waa isku mid oo waxay leeyihiin xuduud furan, waa kala magac laakiin waa isku dhadhan dhankaad ka darsataaba. Diimaha oo dhami waxay u soo degeen in ay u adeegaan dadkii ay u soo degeen oo ay jideeyaan noloshooda balse markii ay dhinteen kuwii la yimid ayay goobtii barakaysnayd ku falaadeen kuwii rumaysnaa oo ciyaalkii baa cago dhiiqo leh...
Aadan dheere iyo dhashiisii is guursatay!
Aadan dheere waxa la yidhaahdaa wuxuu ahaa ninkii ugu horreeyey ee waynuhu abuuray, dhoobo ayuuna ka abuuray. Maalmo yar kadib markuu cidlo dareemay Illaahay wuxuu feedhiisa uga abuuray haweeney ay nolosha wada qaybsadaan. Shahrul-Casalkii markay Jannada ku raaxaysteen ayay jebiyeen amarkii Illaahay ee ahaa geedka ha cunina hana u dhowaanina, geedkii ay cuneen dartii waa lasoo tarxiilay. Geed yar...
Waan hubaa inaanan qoraal ku soo koobi karin waxqabadkii iyo taariikhdii ay ka tagtay laakiin waxa aan isku dayayaa inaan si kooban u xuso shaqsiyadda iyo howl karnimadii gabdhan karaamada weyn aan u hayo ee kor ku xusan! Waxay ku dhalatay gobolka shabeellada dhexe sannadkii 1957,waxayna ku barbaartay oo wax ku baratay magaalada (Marka/Marca) ee caasimadda u ah gobolkaas, Marka waxa ay 90...
Maqaalkii kan ka horreeyay waxaan kaga hadlay Maryy shelly oo ahayd qoraa caan ah oo hadana ahayd afadii gabayaagii iyo faylasuufkii waynaa ee Percy Shelley. Hadaba waxaan jeclaystay in aan wax-yar ka sheego kaalintii uu ku lahaa Shelly aqoonta iyo wacyiga iyo iftiimiinta cilmiga suugaanta iyo falsafadda. Shelley wuxuu ku dhashay Field oo ah goob u dhow Horsham oo ah magaalo ku taal Ingiriiska ...
W/Q: Warsame Jaamac 29th June 2019
Boqorradii Imbaraadooriyaddii Roomaanka